Fitantanam-pitondrana · Septambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Septambra, 2017
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Septambra, 2017
Ny Krizy Nokleary Iraniàna
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Septambra 2017
Raha manao izany ry zareo, dia io no ho fiandohan'ny Ady Lehibe Fahatelo
Ireo Libaney Bilaogera Tamin'ny Herinandron'ny 06/03/06: Tsy Finoana Sy Fahatsapàna Tsindrimandry, Fa Ny Fiainana Mitohy Ihany
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Septambra 2017
Ho anareo rehetra ireo, izao no lazaiko androany, misaotra anareo.
Okraina: Roa Taonan'ny Fitondran'i Yushchenko
Eoropa Afovoany & Atsinanana 27 Septambra 2017
Tomponandraikitra tsy amin'ny fiainantsika fotsiny isika, fa amin'ny fiainan'ny Tanindrazantsika ihany koa; miankina amintsika ny zavatra rehetra
Bitsika Afgàna: Fampihavanam-Pirenena sy Ashura
Azia Afovoany sy Kaokazy 27 Septambra 2017
Nahoana ianareo no mively tena sy mandratsa-drà. [...]; Maniry ny hahazo tombontsoa aho, [...] "te-hanambady aho, fa tsy manam-bola."
Mamaly Ny Fanontanian'ireo Mpiserasera Ny Filohan'i Mozambika, Saingy Miala Amin'ireo Fanontaniana Sarotra
Afrika Mainty 27 Septambra 2017
Tsara kokoa noho ny fiderana ny Fanontaniana sy fanakianana, na dia mety ho ratsy fipetraka sy miteraka fahatezerana aza, satria manery antsika hisaintsaina izy ireo.
Iràna: Ny Tontolo Medikaly Maharaka ny Teknolojia, Ary Ireo Fandinihan'i Norouz
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Septambra 2017
"...Mihira mba tsy hihainoana. Mihomehy mba hanafenana ny ranomaso. Mividy mba hanadinoana ny alahelo.... Tsy maintsy miaina izany aho raha te-ho velona."
Krizin-tsolika Ao Shily: Vinavina Momba Ny Solika biôlôjika (Biôsfera)
Amerika Latina 26 Septambra 2017
Nampihena ny fatran'ny solitany tao Shily ny mari-pàna mangatsiaka tao Arzantina tamin'ity herinandro ity. Na dia nanambara aza ny governemanta Arzantina fa hahazo ny famatsiana ny solitanin'izy ireo tsy tapaka ny Shiliana, mitady vahaolana hafa momba ny angovo ny Shiliana mba hiantohana ny famatsiana angovo ho an'ny firenena.
Karaiba 23 Septambra 2017
Ny Herinandro Tao Bahrain (03/12/06)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Septambra 2017
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2006) Vao avy nahavitra indrindra ny fihodinana tamin'io fifidianana roa, Parlemantera sy Monisipaly, nataony i Bahrain, izay nahitàna parlemanta islamista tohanan'ny governemantan'ny maro an'isa. Ho an'i Mahmood Al Yousif, kandidà ‘liberaly’ toaka monja no tafita ho ao amin'ny parlemanta. “Tsy ny rehetra ankoatra ilay kandidà...
Ireo Bilaogera Libaney Sy Ny Fifanakalozan-kevitra Nasionaly: Tsy Mataho-maso Mena, Fisalasalàna, Ary Tara-Panantenàna
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Septambra 2017
Ilay toetra tsy mataho-masomena sy ilay tantara mampihetsi-po dia nanosika ireo bilaogera hafa hizotra amin'ny fomba firesaka mahatsikaiky